आयोजक हेम्जा युनाइटेड शुभकामना गोल्डकपको फाइनलमा - Pokhara City
Home » आयोजक हेम्जा युनाइटेड शुभकामना गोल्डकपको फाइनलमा
by Pokhara City June 22, 2022
पोखरामा जारी छैटौं संस्करणको शुभकामना गोल्डकपमा खुमलटार युथ क्लबलाई हराउँदै आयोजक हेम्जा युनाइटेड फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
हेम्जाको गौरी शंकर खेलमैदानमा बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा खुमलटारमाथि २–० गोलको अग्रता बनाउँदै आयोजकले फाइनलको यात्रा तय गरेको हो । हेम्जाको जितमा दुवै गोल कमल थापा मगरले गरे ।
अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा रोकिएपनि दोस्रो हाफमा भने हेम्जाले २ गोल गर्न सफल भएको हो । खेलको दशौं मिनेटमा हेम्जाका सुनिल विकले अग्रता गर्ने सुवर्ण अवसर खेर फाले । पेनाल्टी क्षेत्रमा खाली रहेका उनलाई सन्जोक केसीले उत्कृष्ट पास दिएपनि उनले भेट्न सकेनन् । १२ औं मिनेटमा खुमलटारका दिवस छन्त्यालले २ डिफेन्डरको बिचबाट गरेको शसक्त प्रहारलाई हेम्जाका गोलरक्षक एन्जल श्रेष्ठले उत्कृष्ट बचाउ गरे । उक्त बलमा पाएको कर्नरमा कप्तान आसिष श्रेष्ठको हेडर क्रसबार नजिकैबाट बाहिरिदा अग्रता लिने अर्को अवसर गुमेको हो ।
पहिलो हाफमा बराबरीमा रोकिएपनि दोस्रो हाफको ८ औं अर्थात खेलको ५३ औं मिनेटमा हेम्जाका कमलले अग्रता दिलाए । उनले बायाँ एरियाबाट गरेको उत्कृष्ट प्रहार गोलमा परिणत भएको थियो । उनले खेलको ६७ औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै आयोजकलाई फाइनलको यात्रा पक्का गराए । दोस्रो हाफमा भने खुमलटारको प्रदर्सन निकै खस्किएको थियो । दोस्रो हाफमा खुमलटारले खासै प्रहार गर्न सकेन ।
हेम्जाका प्रशिक्षक शौरभजंग कार्कीले आफुहरु योजना अनुरुप खेल्दा जित हासिल गर्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले खुमलटारको कम्जोरीको फाइदा उठाउँदा जित हासिल गर्न सफल भएको बताए । उता खुमलटारका म्यानेजर अञ्जन रानाले आफुहरुले रक्षात्मक तरिकाको खेल खेल खेल्दा स्ट्राइक लाइनमा निकै समयस्या आएको सुनाए । उनले स्ट्राइक लाइनमा कम्जोरी हुदाँ गोल गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रतियोगिता अन्तरगत बिहिबार अफ्रिकी क्लब एभिनियर र चर्च ब्वाइज विच फाइनल प्रवेशका लागि अन्तिम खेल हुदैँछ । असार ४ गतेदेखी संचालन भएको प्रतियोगितामा कुल ८ टिमको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतियोगितामा विभागिय क्लब एपिएफ, चर्च ब्वाइज, विदेशी अफ्रिकनी टिम क्यामरुन, कमलटार, कालिका स्पोट्र्स चितवन, बागमती युवा क्लब सर्लाही, विरगंज युनाइटेड र आयोजक हेम्जा युनाइटेड को सहभागिता रहेको छ । हेम्जा एकेडेमी संचालनार्थ प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको क्लबका अध्यक्ष इन्द्र कुवरँले जानकारी दिए ।
सोमबारदेखि पोखरामा जुनियर राष्ट्रिय टेनिस प्रतियोगिता
कास्की लिगः डिफेण्डिङ च्याम्पियनमाथी नव आदर्शको सँघर्षपूर्ण जित
पोखरामा १५ औं बिटी कप सुरु
पोखरा महानगरपालिका आ. व. २०७९ र ०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ)
पोखरा महानगरको नगरसभा पोखरामा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन जरुरी: मुख्यमन्त्री पोखरेल
कास्की लिगमा ‘बि–१३’ शिर्ष स्थानमा
शुभकामना गोल्डकप असार ४ देखी
पोखरामा असोज ५ देखि तेस्रो माउण्ट एभरेष्ट अन्तर्राष्ट्रिय खुला तेक्वान्दो...
व्यास नगर अल्ट्रा म्याराथन सम्पन्न, राजनीतिक स्थायित्वका लागि गठबन्धन आवश्यकः...
फाल्गुण ७ गते १६ औं सफल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन–२०७८
पोखरा म्याराथन अन्तर्गत चैत १२ हुने दौडको सम्पुर्ण तयारी पुरा
कास्की लिगः उपाधिका लागि शितल ज्योती र हेम्जा युनाईटेड भिड्ने
बिटी कपमा भिमकाली क्लब निलम्बन
बिटी कपको तयारी तिव्र
20th Aaha RaRa Gold Cup 2078...